Horyaalka Premier League: Lix Ciyaaryahan Oo U Tartamaya Abaalmarinta Xiddiga Ugu Fiicnaa Bisha November
HomeWararka CiyaarahaHoryaalka Premier League: Lix Ciyaaryahan oo u tartamaya Abaalmarinta Xiddiga Ugu Fiicnaa Bisha November
December 5, 2020 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska 0
Maamulka horyaalka Premier League ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha ku tartami doona abaalmarinta ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa tartankaas bishii tagtay ee November iyadoo ay lix ciyaaryahan ku loolami doonaan.
Xiddigaha ku tartami doona abaalmarinta midkii ugu fiicnaa PL bishaas ayaa kala ah Bruno Fernandes, Benjamin Chilwell, Jack Grealish, Hojbjerg, Angelo Ogbonna iyo James Ward-Prowse.
Aan ku bilawnee Chilwell ayaa goolkiisii labaad ee xilli ciyaareedkan kasoo dhaliyay Sheffield United, shabaq nadiif ah kala baxay Tottenham isla markaana qayb ka qaatay goolkii koowaad ee Blues kulankii Newcastle United.
Dhinaca kale Fernandes ayaa saddex kulan oo xidhiidh ah shabaqa soo taabtay, kulankii Everton ayuu laba gool iyo caawimo kasoo sameeyay halka uu goolal kasoo dhaliyay West Bromwich Albion iyo Southampton.
Jack Grealish ayaa isaguna gool iyo caawimo soo sameeyay kulankii ay Southampton guuldarrada kala soo kulmeen, gool caawiye kasoo ahaa ciyaartii ay Arsenal 3-0 uga adkaadeen sidoo kalena laag fog ka dhaliyay West Ham United kulankii ugu dambeeyay.
Hojbjerg oo ah masuulka khadka dhexe ee Tottenham ayaa bil guuldarro la’aan ah lasoo qaatay kooxdiisa isaga oo saddex kulan shabaqa u ilaaliyay, 89% kamida baasaskii uu dhiibay saxay isla markaana 10 taako (Taakal) kusoo guuleystay.
Kabtanka Saints ee Ward-Prowse ayaa saddexley laadad xor ah soo dhaliyay bishaas dhammaatay halka uu laba gool oo kale caawiye kasoo noqday.
Ugu dambayn, Ogbonna ayaa gool madax ah kasoo dhaliyay Hammers toddobaadkan halka uu bandhig weyn kasoo sameeyay ciyaartii Fulham.